श्रीमतीले मलाई थुकिन्, आफैंले टाउको ठोक्काएर मलाई फसाइन् -अभिनेता करण
१२ माघ, बुधबार
, Jan 26, Wednesday
२०७८ जेठ १८ मंगलबार
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ शोका मुख्य अभिनेता करण मेहरा सोमबार राती पक्राउ परेका थिए । श्रीमती निशाले उनीमाथि कुटपिटको आरोप लगाएकी छिन् । यो पूरा मामिलामा करणले एक भारतीय सञ्चार माध्यमसँग कुरा गरेका छन् । यसबारे करण मेहरा के भन्छन् त ?
करण मेहराले यसबारे भने, ‘यो निकै दुःखको कुरा हो । यति वर्षको मिहिनेत, यत्तिका वर्षको तपाईंको विवाहमा यस्तो भइरहेको छ । यो निकै दुःखको कुरा हो । पछिल्लो एक महिनादेखि छलफल चलिरहेको छ किनभने निकै लामो समयदेखि हामीबीच कुराहरु राम्रो भइरहेको छैन । त्यसैले हामीले हामी अलग हुने हो कि के गर्ने हो भन्नेबारे सोचिरहेका छौं । त्यसैले हामीले कुरा मिलाउने कोसिस गरिरहेका थियौं ।’
‘निशाका भाइ रोहित सेठिया पनि आएका थिए, कुरा मिलाउन । निशा र उनका भाइले एक एलिमनी अमाउन्ट मागे तर त्यो रकम यति महँगो थियो कि मैले त्यो गर्न सक्दिनँ भनेँ । एलिमनीको विषयमा कुरा चलिरहेको थियो, हिजो राती पनि यसबारे कुरा भएको थियो । उनी राती १० बजे म भएठाउँ आएर यसैबारे कुरा गरे । मैले ‘म त गर्न सक्दिनँ’ भनेँ । त्यसपछि उनीहरुले कानूनी हिसाबले गर्न भने । मैले पनि ‘म कानूनी हिसाबले नै गर्छु’ भनेँ । ’
करणले थपे, ‘त्यसपछि म मेरो कोठामा आएँ । त्यसपछि म आमासँग कुरा गर्न थालेँ । त्यति नै बेला निशा भित्र आइन् र उनले मलाई, मेरा आमाबुवा, मेरा भाइहरुलाई गाली गर्न थालिन् । उनी बेस्सरी चिच्याउन थालिन् । यतिमात्रै होइन, निशाले मलाई थुकिन् । त्यसपछि मैले निशालाई कोठाबाट बाहिर जान भने । त्यसपछि निशाले मलाई ‘हेर, अब म के गर्छु’ भनेर बाहिर निस्किइन् ।’
‘त्यसपछि निशाले भित्तामा आफ्नो टाउको ठोकिन् र सबैलाई मैले गरेको भनिन् । निशाका भाइले ममाथि हातपात गरे । निशाका भाइले ममाथि हिंसा गरे । उनले मलाई थप्पड हाने र छातीमा पनि हाने । मैले उनका भाइलाई आफूले निशालाई नहानेको बताएँ । यसका लागि सीसीटीभी फुटेज हेर्न पनि भनेँ तर क्यामरा पहिला देखि नै बन्द थियो ।’
करणले भने, ‘उनले भिडियो रेकर्ड गर्न सुरु गरे र त्यसपछि प्रहरीलाई बोलाए तर प्रहरीले केही पनि गरेन किनभने उनीहरुलाई वास्तविकता के हो थाहा छ । झुटो मुद्दा हाल्छौ भने वास्तविकता त आइहाल्छ । भोलि अनुसन्धान हुँदा सत्य त पक्कै पनि आउँछ ।’
करणले भने, ‘निशाले जत्ति माग्छिन्, त्यत्ति नै म कहाँबाट ल्याउन सक्छु ? हाम्रो सम्बन्धविच्छेद हुन लागेको थियो, म यत्ति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउँ । यो सबै म काविश, मेरो छोराका लागि गरिरहेको थिएँ । राम्रोसँग कुरा गरेर पनि कुरा सुल्झाउन सकिन्छ । मेरा आमा–बुवाले पनि कोसिस गरिरहनुभएको थिया । तर निशाले मलाई छोडेर गइन्, मैले देखिरहेको थिएँ कि उनले मेरो छोरालाई मबाट टाढा राख्ने कोसिस गरिरहेकी थिइन् ।’
करणले थपे, ‘म केही बेर प्रहरी स्टेशनमा थिएँ, त्यसपछि म साथीको घर गएँ तर निशाले जे चाहेकी थिइन्, त्यो ममाथि भएन । मैले प्रहरीसँग कुरा गरेँ, उहाँहरुले मेरो कुरा बुझ्नुभयो । निशाले स्थिति सम्हाल्नुको साटो थप बिगारिदिइन् ।’
सन् २०२३ सम्म युभेन्टसमै रहन चाहन्छन् रोनाल्डो
अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको सेमीफाइनलमा पुग्यो
जापानमा भारी वर्षासँगै गएको पहिरोमा २० जना बेपत्ता
राजीनामा गर्ने भन्ने कुरा धारा ७६ को प्रक्रियाभित्र कहाँ छ?' -प्रधानन्यायाधीश
कांग्रेसले डा. देवकोटालाई मतदान गर्ने
वैकल्पिक राजनीतिको ‘राप्रपाकरण’
पहिरोको डरले रातभर जागै